यस्ता संकेत देखिए भने सावधान ! मृगौला क्यान्सर हुनसक्छ – Superhit News
यस्ता संकेत देखिए भने सावधान ! मृगौला क्यान्सर हुनसक्छ
एजेन्सी । खानपानमा ध्यान नदिदा तथा सामान्य रोगको समयमै उपचार नगर्दा ठूलो रोगको शिकार भइन सक्छ। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न खानपिन तथा शारिरीक कसरतमा समेत ध्यान दिनु पर्दछ। पछिल्लो समय महिला वा पुरुषमा मृगौला क्यान्सरको समस्या बढ्दै गएको छ। मृगौला क्यान्सरका कारण धेरैले आफ्नो ध्यान समेत गुमाउनु परेको छ। ज्यानै लिने यस्तो खतरनाक रोगको सुरुवाती संकेतबाट आज हामीले जानकारी दिदै छौँ :
यूरिनमा ब्लड देखिनु
यूरिनमा ब्लड देखिनु मृगौला क्यानसरको सुरुवाती चरण हो। यस्तो समस्या देखिनासाथ तपाईले समयमै उपचार गराउनुका साथै खानपिनमा समेत ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कड्नी क्यान्सर एसोशिएशनका अनुसार जुन व्यक्तिमा यस्तो समस्या देखिन्छ। ती मध्ये ४० देखि ५० प्रतिशतमा मृगौला क्यान्सरको समस्या रहन्छ।
साइड र लोअर ब्याक दुख्नु
यदी तपाईको साइड तथा कोखा दुख्ने समस्या छ भने समयमै उपचार गराउनु राम्रो हुन्छ। यस्ता संकेत पनि मृगौला क्यान्सरको हो। ४५ प्रतिशत क्यान्सर विरामीमा यस्तो समस्या देखिएको हुन्छ।
एनोमिया पनि मृगौला क्यान्सरको संकेत हो। २१ प्रतिशत मृगौला क्यान्सरका बिरामी एमोनियाको समस्याबाट ग्रसित हुने गरेको पाइएको छ।
लोभर ब्याक पेनको दुखाई
ब्याक पेनको दुखाई उमेरसँगै बढ्न सक्छ। तर यस्तो दुखाईलाई हेलचक्राई गरेर भने बस्न हुँदैन्। ४१ प्रतिशत मृगौला रोगीमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ।
ज्वरो आउनु तथा बिना कारण वजन कम हुन
लगातार ज्वारो आउनु तथा बिना कारण वजन घटनु पनि मृगौला क्यान्सरको समस्या हो। २८ प्रतिशत मृगौला क्यान्सरका विरामीमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ।
← विश्वकप फुटबलको अभिष्यवाणी गर्ने अन्धो बिरोलो
पत्नीले पठाइन् आफ्नो फोटो, देख्नेबित्तिकै पतिले मागे डिभोर्स, के थियो फोटोमा ? →